Ihowuliseyili heather grey 45% yomqhaphu 55% ipholiyesta ngelaphu for hoodies
Inkcazo yeMveliso: Eli laphu le-polyester yomqhaphu, inombolo yento engu-HS151, inithiweyo nge-45% yeCotton 55% yePolyester. Eli laphu polycotton ijezi kabini kunye ipholiyesta ubuso kunye umqhaphu umva. Ngenxa yomqhaphu wangaphakathi, ukusebenza kokufuma kokulunga kulunge kakhulu, kwangaxeshanye, kunezibonelelo zokuqina okubhetyebhetye, ukurhabaxa okuhle kwaye akukho lula ukushwabana. Le ngelaphu ipholiyesta / umqhaphu yenziwa weft ukunitha umatshini. Ubulumko ...
Inkcazo yemveliso: Eli laphu le-polyester pique, inombolo yento HS865, inithiweyo nge-100% ipholiyesta. Ilaphu elinithiweyo le-pique libonisa ubume obunje ngebhanti obunokwenza iintlobo ezahlukeneyo zedayimani njengokuluka. Eli laphu lendawo linika umoya womoya kunye nokongezwa komoya xa usetyenziselwa iihempe zepoksi. Ukuthelekisa amalaphu ijezi, ilaphu pique ixesha elide kwaye ubukhulu kunye nemvakalo, bonisa ukubila ngaphantsi. Ingxaki kukuba ...
Kwizinga eliphezulu ipholiyesta spandex ijezi eyodwa ezinithiweyo ngelaphu zemidlalo
Inkcazo yemveliso: Eli laphu le-spandex jersey yelaphu, inqaku lethu le-HS069, linithiwe nge-92% ipholiyesta kunye ne-8% spandex. Elinye ijezi elinithiweyo lilaphu ethambileyo, eyolulayo, kwaye ephefumlayo. Ukubhabha kwayo kunye nokuzolula iipropathi kwenza ijezi yenithi yelaphu ifaneleke kakuhle ekwenzeni iilokhwe ezihambahambayo, iimpahla zemidlalo, ijezi yezemidlalo, iimpahla zomthambo, iileggings, kunye nebhra yezemidlalo. Singenza imisebenzi eyahlukeneyo yelaphu ngokwe-cust ...
Ipholiyesta spandex ilastiki ukolula lycra single ijezi ilaphu ingubo
Inkcazo yemveliso: Le polyester i-spandex jersey yelaphu, inqaku lethu le-HS004, linithiwe nge-90% ipholiyesta kunye ne-10% spandex. Elinye ijezi elinithiweyo lilaphu ethambileyo, eyolulayo, kwaye ephefumlayo. Ukubhabha kwayo kunye nokuzolula iipropathi kwenza ijezi yenithi yelaphu ifaneleke kakuhle ekwenzeni iilokhwe ezihambahambayo, iimpahla zemidlalo, ijezi yezemidlalo, iimpahla zomthambo, iileggings, kunye nebhra yezemidlalo. Singenza imisebenzi eyahlukeneyo yelaphu ngokwe ...
Eco-friendly umqhaphu ipholiyesta spandex ukoluka ngelaphu ezinithiweyo iimpahla
Inkcazo yemveliso: Eli laphu le-spandex polyester cotton, inqaku lethu le-HS438, linithiwe nge-51% yePolyester 46% yeCotton kunye ne-3% Spandex. Eli laphu le-polycotton linemvakalelo ethambileyo yesandla, ngenxa yomqhaphu wangaphakathi, ukusebenza komswakama wokulunga kulunge kakhulu, kwangaxeshanye, kunezibonelelo zokuqina okubhetyebhetye, i-draping elungileyo kwaye akukho lula ukushwabana. Inamava amahle okunxiba, okwenza ukuba ibe s ...
Inkcazo yemveliso: Eli laphu lepiyano, inombolo yento engu-HS863, inithiweyo nge-100% yePolyester. Ilaphu lethu lepolyester pique elinithiweyo luhlobo lwelinen ephothiweyo. Ilaphu elinithiweyo le-pique libonisa ubume obunje ngebhanti obunokwenza iintlobo ezahlukeneyo zedayimani njengokuluka. Eli laphu lendawo linika umoya womoya kunye nokongezwa komoya xa usetyenziselwa iihempe zepoksi. Xa kuthelekiswa amalaphu ijezi, amalaphu pique ixesha elide kwaye dim ...
Inkcazo yemveliso: Eli laphu lepiyano, inombolo yento HS018, inithiweyo nge-100% yePolyester. Ilaphu lethu lepolyester pique elinithiweyo luhlobo lwelinen ephothiweyo. Ilaphu elinithiweyo le-pique libonisa ubume obunje ngebhanti obunokwenza iintlobo ezahlukeneyo zedayimani njengokuluka. Eli laphu lendawo linika umoya womoya kunye nokongezwa komoya xa usetyenziselwa iihempe zepoksi. Xa kuthelekiswa amalaphu ijezi, amalaphu pique ixesha elide kwaye dim ...